Gudaha Xarunta CID-da oo Gaari Miinooyin ay ka buuxeen ku Qarxay. - Royal TVRoyal TV
Tuesday, October 24, 11:26 am
Gudaha Xarunta CID-da oo Gaari Miinooyin ay ka buuxeen ku Qarxay.
Posted on February 17, 2012 by editor1
(Royaltv)Qarax maanta barqadii ka dhacay gudaha xarunta dambi-baarista booliiska Soomaaliya ee CID, iyadoo raggii watay gaariga qarxay ay gacanta ugu jiraan ciidamada booliiska.
Gaariga ay waxyaabaha qarxa saarnaayeen iyo afar ruux oo wadatay ayaa waxaa soo qabtay ciidamada nabadsugidda DKMG ah, iyadoo saraakiisha dowladda KMG ay sheegeen in gaariga laga qarxiyay bannaanka CID-da.
“Afar qof oo watay gaariga nooxa raaxada ah oo miineysan ayay ciidamadu qabteen waxaana gaariga uu ku qarxay gudaha xarunta… waxaana k dhaawacmay afar qof oo ay laba ka mid ah yihiin booliis,” ayuu Col. Aadan Kaalmoy Dhaqane suxufiyiinta ugu sheegay xarunta qaraxu ka dhacay gudaheeda.
Inkastoo aysan Al-shabaab sheegan qaraxa ayaa haddana wuxuu ka dhacay xarun ay ciidammo badan oo dowladda ka tirsan waardiye ka hayaan, waxaana qaraxan laga maqlay inta badan Muqdisho.
Saraakiisha dowladda ee qaraxan ka hadlay ma aysan sheegin tallaabada ay ka qaadi doonaan afarta qof ee ay gacanta ku hayaan, iyadoo qaraxan uu noqonayo kii labaad oo qarxa iyadoo ay ciidamada dowladdu gacanta ku hayaan gaariga ay waxyaabaha qarxa saaran yihiin.
Qaraxan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo ciidamada AMISOM iyo kuwa DKMG ay sheegeen inay u jiheysteen gobollada kale ee ay Al-shabaab ka taliso, kaddib markii saraakiishu ay sheegeen inay dhameystireen howlgalladii ay Muqdisho ka wadeen.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii qarax waxyaabaha qaraxa laga buuxiyay uu ku qarxay baar Fatxi oo ku dhaggan Hotel Muna, kaasoo ay ku dhinteen 13-qof oo dhammaantood ahaa shacab ayna ku dhaawacmeen 15-qof oo kale.
This entry was posted in News by editor1. Bookmark the permalink.